Petition · Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmajo & Golaha Shacabka: Xil ka qaadid Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre · Change.org
Xil ka qaadis Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre
Somalia Rights Watch started this petition to Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmajo & Golaha Shacabka
Fashilka Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo Xukuumaddiisa
Waxaa ka soo wareegtay hal sano markii la dhisay Xukuumadda lana siiyay kalsoonida Golaha Shacabka. Kalsooni-siintii waxaa ka dambeeyey fashil ballaaran oo saameeyey dhammaan hay’adaha dowladda ee hoos yimaada Xukuumadda. Fashilkaas wuxuu lee yahay geeso badan sida amnigii oo faraha ka baxay, garsoorkii iyo caddaaladdii oo noqday wax aan jirin, isbar-bar yaac iyo jahwareer hareeyey hay’adihii dowladda, wax isdaba mareyntii iyo musuq-maasuqii oo cirka isku shareeray, eexdii iyo asxaabaysigii oo dhaqan noqday, dhaqaalihii iyo ganacsigii oo hoos u dhacay iyo guud ahaan rajadii laga qabay dowladda oo noqotay mid lagu hungoobay. Ku takri falka hantida dadweynuhu, waxay keenaysaa in dhaqaale loo waayo fulinta shaqadii dowladda iyo bixinta mushaaraadka shaqaalaha. Waqtigii ugu badnaa Xukuumaddu waxay galisay olole baraha bulshada oo loo baxshay igu sawir, kaas oo mar walba ka been sheega dhabta iyo fashilka Xukuumadda.
1) FASHILKA AMNIGA: Waa mid baaxad weyn leh oo saameyn weyn ku yeeshay shacabka, dhaqaalaha iyo nolosha dadka. Amniga dalku wuxuu ku jiraa marxalad khatar ah oo dhalisay dib u dhac ku yimid guulihii horay loo soo hooyay. Tan iyo waqtigii la dhisay Xukuumadda RW Khayre, falalka amni-darro oo dhacay waxaa ku dhintay ama ku dhaawacmay dad ka badan 5,000 oo qof, waana dhimashadii iyo dhaawacyadii ugu badnaa ee dhaca sanad gudihiis. Qaraxyada iyo dilalka lala beegto dadka, gaar ahaan ciidamada amniga, saraakiisha dowladda iyo dadka hormuudka ah way kordheen. Magaalo madaxda waxaa kusoo dhawaaday Al Shabaab labada dhan ee laga soo galo – Afgooye iyo Balcad. Sidoo kale, degmooyinka caasimadda qaarkood waxaa ka shaqeeya amarada Shabaab oo ay ugu dambeysay ammarka lagu soo rogay garoomada ciyaaraha.
Awoodda kooxaha argagixisadu way ku balaaratay dalka gaar ahaan magaalo madaxda. Canshuuraha iyo lacagaha kale oo ay qaadaan Shabaab sare ayey u kaceen waana ka badan yihiin kuwa dowladdu ay qaado. Amarada Shabaab gaar ahaan kuwa la xiriira garsoorka way ka dhaqan galeen goobihii ay dowladdu ka talineysay. Kaalmadii ciidamada ee ka imaanaysey wadamada qaarkood way istaagtay howl gudasho xumo awgeed. Sidoo kale, dhowr wadan oo tababarayaal ka joogeen dalka way ka baxeen ayagoo sabab ka dhigay horumar la’aan dhanka amniga. Qorshayaashii dib u habeynta, dhisidda ciidanka iyo kala wareegidda AMISOM amniga dalka horumar lagama sameyn. Ciidanka amnigu si joogta ah ayey dhexdooda u dagaalamaan, taas oo keenta dhimasho iyo dhaawacyo soo gaara shacabka. Jidadkii iyo isku socodkii dadka waa la xanibay, taas oo saameysay nolol maalmeedkii dadka. Arrimahaas oo dhami waxay dhaliyeen cabsi iyo kalsoonidii shacabka iney aad hoos ugu dhacdo.
2) FASHILKA NIDAAMKA DOWLADNIMO: Waa mid qoto dheer oo khatar galiyey aasaaska nidaamka dowladnimo ee dalka ka jira. Waxaa hareeyay Xukuumadda RW Khayre iyo Xafiiska Madaxweynahaba isbarbar yaac iyo fowdo joogta ah. Waxaa ku habsaday Xukumadda xasilooni darro siyaasadeed oo keentay jahwareer iyo shaqo gudasho la’aan. Waxaa lumay nidaamkii, maamuuskii iyo dhaqankii dowladnimada. Waxaa jira isqab-qabsiyo aan macna ku dhisneyn oo ka jira Wasaaradihii iyo hay’adihii dowladda dhexdooda, oo abuuray kala dambeyn la’aan iyo jahwareer. Waxaa kaloo jira gacan dhaaf Wasaaradihii shaqadooodi lagu hayo gaar ahaan Wasaaradaha muhiimka ah sida Maaliyadda iyo Arrimaha Gudaha oo labaduba noqday qeyb ka tirsan Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha. Waxaa kordhay eexda, musuq maasuqa iyo saaxiibaysiga, taas oo niyad jab ku riday shaqaalaha dowladda.
Waxaa tusaale noogu filan fashilka ku yimid nidaamka dowladnimda qaabka loo maareeyey fadeexaddii dhiibitaanka Qalbi-Dhagax iyo jahwareerkii Bariire. Waxaa kaloo tusaale ah iscasilaaddii Wasiirad Maryan Qaasin markii ay u adkeysan weyday “isbarbar-yaaca” iyo “nidaam-darada” sida ay hadalka u dhigtay. Sidoo kale, waxaan xasuusannaa Wasiiradii kale ee shaqada laga eryay, ka dib markii ay ka horyimaadeen kaligi talisnimada, xushmad-darradda iyo hoggan xumida RW Khayre. Sidoo kale, waxaan xasuusannaa shaqo ka ceyrintii taliyayaasha sida taliyihii Boliiska, Nabad Sugidda, CXD, Ciidanka Asluubta iyo kuwo kale. Waxaan kaloo xasuusannaa in xilalkaas qaarkood aan la buuxun dhowr bilood waqti wadanku dagaal kula jiro argagixisada Al Shabaab. Waxaa la yaab leh in Gen. Bashiir Maxamed Jaamac “Goobe” oo xilka ciidanka Asluubta laga qaaday, hadana isla sanad gudihiis lagu soo celsho. Waxaa kaloo marqaati u ah fashilka Xukuumadda in dhammaan Agaasimayaashii hay’adaha dowladda si sharci darro ah lagu ruqseeyey, ka dibna lagu fashilmay in badalkoodi la qoro, hadana ay wali ku shaqeeyaan si ku meel gaarnimo ah. Waxay muujineysaa fudeyd, karti-xumo iyo jahwareer siyaasadeed in uu ka jiro Xafiiska ugu sarreeya Xukuumadda.
3) FASHILKA GARSOORKA IYO CADDAALADDA: Waa mid dalka dib ugu celin kara fowdadii xiligii dowlad la’aanta. Waqtigii Xukuumadda la dhisay illaa iyo hadda, ma jiraan wax horumar ah oo laga sameeyey garsoorka. Runtii waxaaba la oran karaa dib u dhac xooggan ayaa ku yimid hay’adihii garsoorka. Waxaa sii ballaartay musuq maasuqa iyo eexda, gaar ahaan musuq maasuqa la xiriira siyaasadda, mashaariicda iyo dhulalka. Nasiib darro, waxaa ka faa’iideystay habac-sanaanta kooxda Shabaab oo billaabay iney buuxiyan doorkii dowladda.
Waxaa kaloo nasiib darro ah in Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre siyaasadeeyay hay’adahii garsoorka una isticmaalay danahiisa gaarka ah ee siyaasadeed ama shaqsi. Waxaa lagu mashquuliyey hay’adihii garsoorka in lala dagaalamo ururada iyo dadka uu Ra'iisul Wasaare Khayre u arko kuwa ka ra’yi duwan ama kula tartami kara siyaasadda dalka. Taasi waxay sababtay in hay’adihii garsoorku noqdaan laan ka tirsan Xukuumadda oo ay lunto madax-bannaanidii iyo doorkii garsoorka. Waxaa kale oo lumay kalsoonidii shacabka ee garsoorka oo ay adkaan doonto sidii dib loogu soo celin lahaa.
4) FASHILKA SIYAASADDA: Waxaa uu horseeday xasilooni-darro cusub oo ku baahday dalka. Waxay Xukuumaddu si cad ugu guul-dareysatay maareynta siyaasadda, taas oo keentay jahwareer iyo khataro ku yimid danaha iyo madax bannaanida dalka. Arrimaha xasaasiga ah ee hadda taagan oo ay Xukuumadu maareyn la’dahay waxaa ka mid ah heshiisyada siyaasadeed ama dhaqaale ee dibadda, saldhigyada militari ee sharci darrada ah, darbiga Kenya ka dhiseyso xadka Soomaaliya, biyo-xireennada lagu sameeyey illaha wabiyada Shabeelle iyo Jubba, wada-hadalada Soomaaliya iyo Somaliland iyo xiriirka iyo wada-shaqeynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Waxaa sidoo kale dib u dhac ku yimid xiriirada aan la leenahay dowladaha iyo hay’adaha dalka ka shaqeeya, taas oo ay keentay qorshe xumo iyo dano gaar ah oo siyaasadeed. Wax qarsoon ma’ahan ceebtii RW Khayre ka soo raacday socdaalkii Imaaraadka oo asagoo jooga dalkaas heshiis khuseeya khayraadka dalka ay kala saxiixdeen Somaliland iyo labo wadan. Arrintaasi waxay muujineysaa hoos u dhaca ku yimid haybaddii iyo sharafkii dalka iyo awood la’aanta dowladda Soomaaliya.
Arrinta Baarlamaanka, tii Cabdiraxman Cabdishakur iyo Senator Cabdi Qeybdiid markii lagu daro amni darrada iyo fashilka cadaaladda, dowlad wanaagga iyo arrimaha dibadda waxay ku tusaysaa in aan meel barakeysan loo wadin ummadda. Dalka waxa uu galay khatar iyo marxalad ay adag tahay in la joogteeyo ama ay sii socoto.
Hadaba, si loo samata bixiyo dalka waa in tallabooyinka soo socda sida ugu dhaqsiyaha badan loo qaadaa:
(1) In Madaxweynaha iyo Baarlamaanku kalsoonida kala laabtaan Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre si waafaqsan dastuurka, maadaama ay tahay marqaati ma doonto fashilka iyo howl-gabnimadiisa, dalkiina u geliyey qalalaase amni iyo mid siyaasadeed.
(2) Ka dib kalsooni kala noqoshada Ra'iisul Wasaaraha, in si dhaqso ah loo dhiso Xukuumad tayo dhab ah leh kana bixin karta dalka iyo dadka marxaladdaan adag.
(3) In la dhowro lana xoojiyo sarreynta iyo ku dhaqanka sharciga, si looga badbaadiyo dalka khataraha nuucaan oo kalaa.
(4) In Madaxweynaha iyo Guddoomiye Jawari ka wada shaqeeyaan dib u soo celinta xiriirkii, wada shaqeyntii iyo isku kalsoonidii hay'adaha dawladda si ay shaqooyinkoodi dib ugu laabtaan.
5) In ha'adaha amniga oo laga leexiyey waajibaadkoodi qaran, dib loo abaabulo si amni xumada dalka hareereysay wax looga qabto.
Today: Somalia is counting on you
Somalia Rights Watch needs your help with “Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmajo & Golaha Shacabka: Xil ka qaadid Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre”. Join Somalia and 359 supporters today.